REPUBLICADAINIK | के हो आनो ? कसरी उपचार गर्ने ? - REPUBLICADAINIK
के हो आनो ? कसरी उपचार गर्ने ?
काठमाडौं । आँखाले अँध्यारो, उज्यालो, राम्रो, नराम्रो दृश्य, ठाउँ र विभिन्न प्रकारका रङ चिन्ने काम गर्दछ । आँखाको सुरक्षा गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
आँखा पाक्ने, मासु बढ्ने, कसिंगर पर्ने, सामान्य चोटपटक लाग्ने, चिप्रा लाग्नु, मोतिबिन्दु, जलबिन्दु, अन्धो (स्टाई) आउनु आदिका कारण आँखा जोखिममा पर्न सक्छ ।
आनोलाई मेडिकल भाषामा स्टाई भनिन्छ । हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यो समस्याले धेरै नै दुःख दिन्छ । आनो भनेको आँखाको माथि वा तल परेलीमा हुने एक प्रकारको संक्रमण हुनु हो ।
रातो, दुख्ने किसिमको दानाजस्तो चिज परेलीको किनारमा आउँछ । यो आँखाको माथि या तलको कुनै एउटा परेली र आँखाको कुनामा निस्कन्छ ।
आनोले गर्दा कहिलेकाहीँ प्रभावित आँखा धेरै सुन्निने पनि हुन सक्छ । यसलाई गाउँघरको सामान्य भाषामा आनो अथवा अन्धो आउने पनि भनिन्छ ।
यो समस्या महिला–पुरुष, युवा–युवती , बच्चा–वृद्ध जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ । सायद नै कोही व्याक्ति होला, जसलाई जीवनमा एक न एकपटक आनो नआएको होस् ।
शरीरमा हुने कुनै पनि प्रकारको रोगको पछाडि निश्चय पनि एउटा न एउटा कारण हुन्छ । आँखाको परेली किनारमा एक प्रकारको ग्लान्ड्स हुन्छ ।
कुनै कारणवश परेलीको किनारमा हुने ग्लान्ड्समा एक प्रकारको स्टेफलोकोक्कस नामक ब्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा नै आनो निस्कन्छ । यो आनो एकपटक आएर केही दिनमा निको भए पनि कसै–कसैलाई भने बारम्बार आइरहने पनि हुन्छ ।
आँखाको परेलीमा दुख्नु । आँखाबाट बढी आँसु आउनु । आँखा चिलाउनु । आँखाबाट कचेरा निस्कने र बिहान उठ्दा आँखा टालिनु । घाममा हेर्न गाह्रो हुनुलाई आनोको लक्ष्णका रुपमा लिइन्छ ।
आनोलाई घरेलु उपचारबाट समाधान गर्न सकिन्छ । दिनमा ३–४ पटक ५–७ मिनेट सहन सक्ने गरी तातो पानीले सेक्ने । आँखा सफा राख्ने । आँखा नमिच्ने ।
आनोलाई निचोर्ने वा जबर्जस्ती थिचेर निकाल्ने प्रयास नगर्ने । आँखामा गाजल वा कन्ट्याक लेन्स नलाउने । घाँममा हिँड्दा चस्मा लगाउने । धुलो, धुवाँबाट आँखालाई बचाउने ।
आँखा धेरै सुन्निएमा । आँखा धेरै दुख्न थालेमा । पिप या रगत निस्कन थालेमा । ज्वरो आएमा । आँखाले देख्न कम भएमा । बारम्बार आनो आइरहेमा चिकित्सकोमा गएर उपचार गराउनुपर्छ ।
आँखा सफा राख्ने । सफा पानीले धुने । गाजलको प्रयोग नगर्ने र धेरैजनाले एउटै तौलिया प्रयोग नगर्ने । फोहोर हातले आँखा नछुने वा नमिच्ने । कन्ट्याक लेन्स लगाउनु र निकाल्नुअघि हात साबुनपानीले राम्ररी धुने । लेन्सलाई राम्रोसँग कीटाणुनाश गरेर मात्र प्रयोग गर्ने कार्यले आनोलाई सञ्चो बनाउन सकिन्छ ।
माथिको परेलीमा आनो भएमा फासफोरिक एसिड, पल्साटिला । दाहिने आँखाको परेलीमा आनो भएमा नेट्रम म्युर । देब्रे आँखामा भएमा बेराइटा कार्ब, हाइपेरिकम । आँखाको तलको परेलीमा भएमा रसटक्स, ग्रेफाइटिस, फोसफोरस, हाइपेरिकम । कडा खालको आनो भएमा कलकेरिया कार्ब, कोनियम, सिपिया, साइलिसिया, थुजा, स्टेफसिग्रिया । बारम्बार आनो आइरहने गरेमा कोनियम, ग्रेफाइटिस, सोरिनम, साइलिसिया, सल्फर, स्टेफसिग्रियामार्फत पनि उपचारगर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक पनि हिपरसल्फर, लाइकोपोडियम, कल्केरिया फ्लोर, फेरमफोस, कालिफोस आदि औषधि आवश्यकताअनुसार दिन सकिन्छ । उपरोक्त औषधिहरू चिकित्सकको सल्लाह लिएर सेवन गर्न सकिनेछ ।
Published : Thursday, 2018 September 27, 9:32 pm